နိဗ္ဗာန်ဟူသည် — →
စကြဝဠာကို သိနားလည်ရန် ကြိုးစားခြင်း၌ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် အထူးဇွဲကောင်းကြသည်။ ထိုသိပ္ပံပညာရှင်များ စာရင်းတွင် ဟော့ကင်းလည်း အပါအ၀င်ဖြစ်သည်။
(I enjoy explaining science and answering questions.)
ဟော့ကင်းသည် သိပ္ပံနှင့်ပတ်သတ်၍ ရှင်းပြရတာ၊ သိပ္ပံနှင့်ပတ်သတ်၍ မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရတာ လွန်စွာနှစ်ချိုက်ကြောင်း ဖော်ကြူးခဲ့သည်။
ဟော့ကင်းသည် ဇွဲကောင်းလွန်းသဖြင့် ဤသို့ပင် ကြွေးကျော်ခဲ့သည်။
(–acomplete understanding may not be beyond our powers. We may not be forever doomed to grope in the dark. We may break through toacomplete theory of the universe. In that case, we would indeed be Master of the Universe.)
ကျွန်တော်တို့ဟာ စကြဝဠာကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ သိနားလည်နိုင်ဖို့ မမျှော်လင့်နိုင်စရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။ အမှောင်ထဲကို ဒီလိုပဲ လေးဖက်ထောက် သွားပြီးတော့ အမြဲတမ်း စိတ်ပျက်နေရမည်မှ မဟုတ်တာ တစ်နေ့စကြဝဠာနှင့် ပတ်သတ်လို့ အပြည့်အစုံ သီအိုရီတစ်ခုက ရရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ကယ် ဒီလိုရရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ စကြဝဠာဆိုင်ရာ ဆရာကြီးတွေပေါ့ဟု ပြောခဲ့ဖူးသည်။
ဟော့ကင်းသည် သူကိုယ်တိုင် (Master of the Universe) ဖြစ်လိုဟန်တူသည် သိုမဟုတ် သူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းက သူ့အား (Master of the Universe) ဟုကင်မွန်း တပ်လိုကြသည်။
(We may understand fully in the not-too-distant future.) ဟုတင်ပြခဲ့သည်။
သိပ်မဝေးတော့တဲ့ အနာဂတ်မှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ စကြဝဠာ အကြောင်း ကောင်းကောင်း သိတော့မယ်။ ခံယူချက်တစ်ခုကလည်း (it is surely better to strive foracomplete understanding than to despair of the human mind.) ဟူ၍ တင်ပြခဲ့သည်။
လူ့စွမ်းရည်တွေကိုစိတ်ပျက် လက်လျော့နေမည့်အစား သိလိုသော သီအိုရီတစ်ခုကို သိအောင် ကြိုးစားခြင်းသည် ပိုပြီးကောင်းတာပေါ့ဟု အားပေးခဲ့သည်။
ဟော့ကင်းသည် သူကိုယ်တိုင် စကြဝဠာ ဆိုင်ရာ လျှို့ဝှက်ချက်များကို အထူး စိတ်ဝင်စား လေ့လာခဲ့ရာ (Black Hole) ပတ်သတ်၍မူ အထူး နာမည်ကြီးခဲ့ကြောင်း ထင်ရှားသိသာပါသည်။
Tags: BLACK HOLE, Science
This entry was posted in Articles and tagged BLACK HOLE, Science. Bookmark the permalink.